मिर्गौला स्वस्थ्य छ वा छैन कसरी थाहा पाउने ? बिग्रन नदिन के गर्ने ? – Annapurna Daily
मिर्गौला स्वस्थ्य छ वा छैन कसरी थाहा पाउने ? बिग्रन नदिन के गर्ने ?
On Mar 13, 2022 6,061
मिर्गौला रोग के हो? प्रत्येक मानिसका शरीरमा मेरुदण्डको दुवैतर्फको मध्यभागमा करङको ठीक मुनि दुई वटा सिमी आकारको अंगहरू हुन्छन्। यिनै अंगलाई मिर्गौला भनिन्छ। मिर्गौलाले २४ घण्टामा करिब २ सय लिटर रगत छान्ने काम गर्दछ। यस प्रक्रियाबाट रगतमा भएका विकार वस्तु हटाउनुका साथै अत्यधिक पानीलाई पिसाबको माध्यबाट बाहिर निकाली शरीरमा पानीको मात्रामा सन्तुलन कायम गर्दछ।
यही महत्वपूर्ण अंगमा देखिने रोगलाई नै मिर्गौला रोग भनेर चिनिन्छ। मिर्गौला महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने कुरा तबमात्र थाहा हुन्छ, जब मिर्गौला विग्रन्छ। जब मिर्गौलामा रोग लाग्छ। मिर्गौला विग्रिएपछि सातामा दुई देखि ३ पटक नियमित डायलाइसिस गरेर रगत सफा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कि भने आफन्तको मिर्गौला प्रत्यारोपण गनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलाइसिस सेवाको सरकारले नि: शूल्क गरेको छ। तर डायलाइसिस सेवा लिन अस्पताल पुग्न तथा अन्य औषधि सेवन नियमित गर्न धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण नगरी सुरुवाती चरणमा मिर्गौला विग्रिएको थाहा हुँदैन। ८० प्रतिशत मिर्गौला विग्रिएपछि मात्र बिरामीमा लक्षणहरु देखिन थाल्छ। त्यसैले समयसमयमा मिर्गौला परीक्षण गराउनु पर्दछ। मिर्गौला विग्रिसकेपछि दुःख भोग्नुभन्दा मिर्गौला रोग लाग्नै नदिन सचेत हुनुपर्छ।
पिसावमा प्रोटिन गएको छैन भने मिर्गौला सम्बन्धि रोग लागेको हुनसक्छ। त्यसैले पिसाव सम्बन्धि समस्या छ भने मिर्गौला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ। मिर्गौलामा खराबी छ वा छैन भनेर रगतमा क्रियाटिनिनको मात्रा परीक्षण गर्न सकिन्छ। यदी रगतमा क्रियाटिनिनको मात्रा बढेको छ भने मिर्गौला विग्रिन सुरु भएको संकेत हुनसक्छ।
यस्तै अल्टासाउण्ड तथा भिडियो एक्सरे गरेर पनि मिर्गौला विग्रिएको छ,छैन। पत्थरी वा फोका आएको छ वा छैन। शरीरमा दुवै मिर्गौला छ वा छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले वर्षमा एकपटक परीक्षण गरेर मिर्गौला स्वस्थ छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउदा मिर्गौलामा समस्या भएको समयमै पत्ता लगाउन सकिन्छ र समयमै उपचार गर्दा मिर्गौला जोगाउन सकिन्छ।